यी व्यक्ति जसले साइकल चो’रेरै भक्तपुरमा तीन तले घर ! हेर्नुहोस कसरी ? वास्तवीक थाहा पाउदा प्रहरी नै तिनछक – Sanchar Patrika
यी व्यक्ति जसले साइकल चो’रेरै भक्तपुरमा तीन तले घर ! हेर्नुहोस कसरी ? वास्तवीक थाहा पाउदा प्रहरी नै तिनछक
काठमाडौँ । सर्लाही घर भएका रमेश माझी उर्फ सुरेश महानगरीय प्रहरी वृत नयाँ बानश्वरको हि’रासतमा छन् । बानेश्वर प्रहरी वृतको पार्किङमा महँगा साइकल देख्न सकिन्छ । सुरेश र ती साईकलबीच खास सम्बन्ध छ । ती साइकल सुरेशले चो’रेर जम्मा गरेका हुन् । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–५ घर भएका सुरेशको चो’री गर्ने तरिका असामान्य छ ।
लकडाउन शुरु भएपछि काठमाडौँ र भक्तपुरमा साइकल चो’री ह्वात्तै बढ्यो । अपराध महाशाखाको चो’री नियन्त्रण गर्ने शाखाका अनुसन्धान अधिकारी चो’र पत्ता लगाउन लागि परे । चो’री भएका ठाउँका सिसीटिभी फुटेज जम्मा पारेर विश्लेषण गरे ।
सिसीटिभी फुटेजका आधारमा हुलिया पहिचान गरेर महाशाखाबाट खटिएको टोलीले थापागाउँबाट सुरेशलाई प’क्राउ गर्यो । चो’रीको साइकलमा घुमिरहेको बेला उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । ‘लामो अनुसन्धानपछि साइकल चो’रीमा संलग्न सुरेशलाई प’क्राउ गरेका छौँ,’ महानगरीय अ’पराध महाशाखाका प्रवक्ता (एसपी) ईश्वर कार्कीले भने, ‘आ’रोपीले महँगो मूल्यका साइकल चो’रेर वर्कशपमा बेच्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।’
नयाँ र महँगा साइकल उनको निशानामा पर्ने गरेको छन् । प्रहरीले उनले चो’रेको ८ वटा साइकल ब’रामद गरेको छ । ती साईकल ७० हजार देखी २ लाख मूल्यसम्मका छन् । लकडाउन शुरु भएपछि शंखमुलबाट सुरेशले २ लाखको साइकल सजिलै चो’रे । सिसीटिभी फुटेजमा देखिएअनुसार पार्किङ गरेर राखेको सो साइकलको लक खुस्काउन पेचकसको सहायताले उनले केहीमिनेट मात्रै लगाउँछन्, अनि चढेर हिँड्छन् ।
चो’रेरै तीन तले घर !
सुरेश ४४ बर्षका भए । भक्तपुरको च्याम्हासिंहमा रहेको उनको घरको तेस्रो तल्ला धमाधम फिनिसिङ हुँदै छ । लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा साइकल चोर्ने सुरेशले चो’रेरै घर बनाएको प्रहरीको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि चो’रीमा संलग्न सुरेशले आफ्नो घर देखाउन निकै आनाकानी गरे । तर, प्रहरी दबाबको सामु उनको केही लागेन । जब उनले आफ्नो घर देखाए, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी नै छक्क परे । ‘च्याम्हासिंहमा तीन तले घर बनाएको देखिन्छ,’ एसपी कार्की भन्छन्, ‘सुरेश साइकल चो’रीमा लामो समयदेखि संलग्न छन्, घर बनाउने आय स्रोत अरु देखिँदैन ।’
साईकलचो’रीका ‘मास्टरमाइन्ड’ खोज्न महाशाखाको चो’री अनुसन्धान शाखालाई लामो समय लाग्यो । ६ महिनाको खोजीपछि सुरेशलाई प’क्राउ गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चो’रेका साइकल उनले भक्तपुर नगरपालिका–९ मा लक्ष्मी सुन्दर वासुले सञ्चालन गरेको ‘सुन्दर मोटरसाइकल वर्कशप’ मा लगेर बेच्थे । १ लाख ५० हजार मूल्य पर्ने साइकल उनले ८ देखि १५ हजारसम्म बेच्ने गरेको महाशाखाले जनाएको छ । वर्कशपमा चो’रीको साइकलका २४ वटा लक फेला परेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका धुरन्धर साइकल चो’र ६ महिनादेखि महाशाखाको खोजी सूचीमा थिए । तर, प’क्राउ परेका थिएनन् । असार ३० मा उनी थापागाउँमा साइकल चढेर हिँड्दै गर्दा सादा पोशाकका प्रहरीको आँखामा ठोक्कियो–‘निलो ज्याकेट ।’
धुलो छेक्न साइकल, मोटरसाइकलमा हिँड्दा लगाइने त्यही ज्याकेटको क्लूबाट ६ महिनाको प्रयासपछि स’मातिए रमेश माझी उर्फ सुरेश । कालो क्याप र बाँधेको लामो कपाल उनको हुलिया थियो ।
तीनकुने स्थित भ्याली रिकेश सप्लायर्स पेट्रोल पम्प नजिकैबाट साइकल चो’रेको सिसीटिभी फुटेजमा देखिएको ‘निलो ज्याकेट’को हुलियाको आधारमा प्रहरीले प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको थियो । सुरेशले चो’रेको साइकलकिन्ने ‘सुन्दर मोटरसाइकल वर्कशप’ सञ्चालक लक्ष्मी सुन्दर वासुलाई पनि प्रहरीले प’क्रेर चो’री मु’द्दा चलाएको छ ।
PrevOMG<<२० वर्ष सजाय तोकिएका व्यक्ति २२ वर्षपछि पक्राउ
Nextबिहानीको खाली पेटमा लसुनको सेवनले चमत्कारिक फाईदा मिल्ने, सबैको जानकारीका लागि पढेर जानकारी लिनुहोस
“विदेशबाट पीसीआर परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आउनेहरुले होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने”
‘जतिसक्दो चाँडाे लामो दूरीका गाडी पनि चलाऔँ, स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अपनाउन तयार छौँ’ – यातायात व्यवसायी
मनकारी ! नायिका एलिजा गौतम राहत बोकेर सिन्धुपाल्चोक जादै !! [ सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ ]